रहेनन् प्रजातान्त्रिक अगुवा लोकमणि गिरी ! मुख्यमन्त्रिदेखि कांग्रेस नेताहरुद्वारा दुख ब्यक्त - Jagaran Online
रहेनन् प्रजातान्त्रिक अगुवा लोकमणि गिरी ! मुख्यमन्त्रिदेखि कांग्रेस नेताहरुद्वारा दुख ब्यक्त
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार २१:३६
कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य दिपक गिरीलाई पितृ शोक
घोराही, फागुन २२ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री दीपक गिरीलाई पितृ शोक परेको छ । गिरीका पिता ८३ बर्षीय लोकमणि गिरीको शनिवार दिउँसो पौने २ बजेतिर राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा निधन भएको हो ।
तुलसीपुरस्थित घरमै बस्दै आएका गिरी दिउँसो एकाएक बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
आफन्त तथा प्रदेश सभा सदस्य शंकर गिरीले हृदयघात भएको जस्तै समस्या देखिएपछि गिरीलाई अस्पताल पु¥याइएको बताए । उनका अनुसार अस्पताल पु¥याएको केही बेरमै उनलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपूर्व उनलाई कुनैपनि खाले स्वास्थ्य समस्या नरहेको प्रदेश सभा सदस्य गिरीले बताए । स्वर्गिय गिरीकी ८० बर्षीया धर्मपत्नि छाँया र छोराहरु दीपक, छोरी रचना, छोरा, ज्वाला र ज्योति गिरी रहेका छन् । स्वर्गिय लोकमणिका बुवा बलभद्र गिरी बिक्रम संवत २०११ सालमै नेपाली काँग्रेसको तत्कालिन सल्लाहकार परिषदको सदस्य थिए ।
त्यतिबेला उक्त पद अहिलेको राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधिसभाकै हैसियतको मानिन्थ्यो । बुवाकै राजनीतिबाट दिक्षित लोकमणि गिरीपनि लोकतन्त्रकै पक्षमा लडिरहे । सरल र सालिन स्वभावका धनि गिरी नेपाली काँग्रेस भित्र भने जहिलै अभिभाबकिय भूमिकामा थिए । क्रियासिल सदस्य उनी काँग्रेसको राजनीतिमा कहिलै लाभको पदका लागि लडाई लडेनन् ।नेपाली काँग्रेस भित्र संधै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका गिरी र उनको परिवारको राजनीतिमा ठूलो योगदान छ ।
लोकमणि गिरी राप्ती तत्कालिन समयमा राप्ती अञ्चल पञ्चायत निरिक्षण अधिकारी, अञ्चल निर्देशन अधिकारी, तत्कालिन पञ्चायतमा युवा संगठनको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य समेत भएका थिए ।
प्रदेश सभा सदस्य शंकर गिरीका अनुसार २०३५ सालको निर्वाचनमा लोकमणि गिरी दाङबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित भएका थिए । त्यो बेला ४ जना माननियहरुले जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा समर्थन गरेका थिए ।
चितवनका भिमप्रशाद श्रेष्ठ, बाग्लुङका कुलराज शर्मा, पर्साका राधाकृष्ण कलवार र दाङका लोकमणि गिरीले राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदाहुँदै बहुदलको पक्षमा समर्थन जनाएका थिए । सिंहदरवार ग्यालरीमा स्वर्गिय गिरीले बहुदलको समर्थन गरेर बहुदलकै पक्षमा लागेपछि संसद भवन भित्रै गिरीमाथि पञ्चहरुले कुटपिट गरेको प्रदेश सभा सदस्य गिरीले बताए ।
गिरीको असामहिक निधनप्रती नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्य शंकर पोखरेलले दुख ब्यक्त गरेका छ्न । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले भनेका छन-` पुराना राजनीतिज्ञ लोकमणी गिरीको निधनले दुखित छु,दाङ जिल्लावाट राष्ट्रिय पंचायतका सदस्य समेत हुनुभएका गिरीजी प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली । नेकाका नेता तथा मित्र दिपक गिरी लगायत शोकसन्तप्त परिवाजनमा गहिरो समवेदना ।´